चीनको पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी हो ? – Mission
अाखिर के चाहन्छ चीन ?
काठमाडौं । नेपालमा १२ वैशाखमा विनाशकारी भूकम्प आयो । भूकम्पबाट गोरखासहितका वाग्मती अञ्चलमा जिल्लाहरुमा सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुग्यो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापारको लागि सिन्धुपाल्चोककै तातोपानी नाका भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बन्द हुन पुग्यो । तर, भूकम्प गएको ८ महिना बितिसक्दा पनि चीनसँगको प्रमुख र महत्वपूर्ण तातोपानी नाका अझै खुल्न सकेको छैन । नेपालले यो नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर, चीनको प्राथमिकता तातोपानी नभई रसुवागढी नाकातर्फ रहेको देखिन्छ । भूकम्पबाट प्रभावित भएको भन्दै यो नाका खुल्न चार पाँच महिना लाग्ने चीनले बताउँदै आएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस २१, २०७२ 1:24:07 PM |
Prevराज्यमन्त्री दिनेश चन्द्र यादवद्धारा कोहलपुर खानेपानीको निरक्षण गर्दै ः तस्बिर÷मिसन
Nextसन्तुष्टिपूर्ण यौनजीवनका लागि यसो गर्नुहोस्